Minecraft na-aga obe-ikpo okwu na "Mmelite enyi na enyi" | Gam akporosis
Minecraft na-ewe nnukwu nzọụkwụ iji bụrụ egwuregwu vidiyo zuru ezu
Manuel Ramirez | | Egwuregwu gam akporo, Minecraft, Noticias
Minecraft bụ otu nke egwuregwu vidio kachasị egwu akụkọ ihe mere eme na ngbanwe ya bụ ihe ịtụnanya na afọ ndị a niile anyị maara ya dị ka obere beta ruo mgbe ọ dị taa ka e wee nweta ya na Microsoft. Minecraft agbanweela ka ọ bụrụ ngwa ọrụ maka mmụta dị ka ọ na-eme n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ebe a na-eji ya ịkọwapụta ihe okike nke ụmụ akwụkwọ site na oke ike ya iji wulite gburugburu yana ụdị ụlọ obibi niile.
Ọ bụ ugbu a mgbe ọ na-achọ ịghọ otu n'ime egwuregwu vidio nke kachasị nzọ na egwuregwu vidio zuru oke nke enwere ike igwu ya na PC, ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụ ngwaọrụ iOS na otu sava ahụ dị na ndị ahụ -kpọrọ Minecraft Ala. Nnukwu nzọ nke Microsoft nke chọrọ ime ka ọtụtụ nde ndị egwuregwu sonyere n'otu oghere ahụ mepere emepe n'agbanyeghị ebe ha rụnyere ihe egwuregwu ahụ. Nkwuputa a sitere n'aka Mojang onye kwuputara na "mmelite enyi" bụ nke ga-eme ka ọrụ a dị ukwuu na nke pụrụ iche.
1 Soro ndị enyi gị gwuo egwuregwu dị iche iche
2 Nhazi nke «Tinye ons»
Soro ndị enyi gị gwuo egwuregwu dị iche iche
Mojang, ulo oru nke Notch kere n’oge na nke di nke Microsoft nwetara site na ijeri 2.500 dollar na 2014, ọ pụtara na E3 iji kpọsaa mbugharị mbụ ya iji mee ka ndị egwuregwu nke afọ niile na ebe dị iche iche sistemụ arụmọrụ dị iche iche dịrị n'otu.
Mmelite nke "Enyi na Enyi", anyị kwuru banyere ya ụbọchị ole na ole gara aga, na-enye ohere ka ndị ọkpụkpọ nọ na ekwentị mkpanaaka (Android, iOS na Gear VR) na Windows 10 na-egwu egwu site na Ugbo ala, nke gbasara sava nke enwere ike inweta site na oku.
Nkwado maka nhọrọ obe a chọrọ akaụntụ Xbox Live, ọ bụ ezie na ekwesịrị ikwu na maka njikwa Xbox One ọ gaghị adị ruo na njedebe nke afọ. Na mbụ, ịnwere ike igwu egwu naanị mgbe ndị enyi gị niile nọ na mkpanaka, Windows 10 ma ọ bụ Xbox, mana ọ bụghị mgbanwe nke nyiwe ndị ahụ.
Ihe omuma ozo kwesiri iburu n'uche 100 nde ndị egwuregwu nwere Minecraft, bụ na Realms dị ọbụlagodi mgbe onye nwe ya, na-akwụ € 7,99 (na atụmatụ kwa ọnwa), anaghị adị n'ịntanetị. Nke a ga - eweta akụkụ dị iche iche dị iche iche ka ndị enyi anyị ọ bụla nwee ike igwu ihe nkesa na-enweghị anyị ịnọ. Tupu, ọ bụrụ na ị na-egwu site na PC, ị ga-enwe ihe nkesa na-emeghe site na PC gị ka ụfọdụ ndị enyi gị nwee ike jikọọ na mpụga IP ma ọ bụ site na netwọkụ mgbe ọ sitere na otu kọmputa ahụ.
Nhazi nke «Tinye ons»
Kwue ugbu a ọdịnihu nke minecraft Ọ na-eme n'ihi na ị nwere ike igwu egwuregwu na PC gị, nke mere na enyi na-ejikọ site na ọrụ ya n'oge ezumike ya na iPhone ya na onye ọzọ na-eme ya site na mbadamba nkume ya mgbe ọ nọ ezumike na osimiri.
Mana ihe bụ na ọ bụghị naanị na akụkọ ahụ na-anọ ebe a, mana Minecraft ga-agụnye "tinye-ons". Otu ihe mere Minecraft ji bụrụ ihe ọ bụ taa bụ maka nnukwu obodo o gbachiri kemgbe ọ malitere. Obodo na-eguzosi ike n'ihe nke ndị modders bụ ndị na-ewebata ihe odide, ngwaọrụ, na ụwa dị iche iche. Na ụfọdụ mods ị nwere ike ịnweta ụwa nwere isiokwu nke Star Wars ma ọ bụ tinye ndị ọrụ nchekwa iji mee ka ihe nkesa gị nwee nchebe. Nke a bụ ihe Mojang achọghị ichefu.
Ya mere, ọ ga-emejuputa tinye-ons na-enwe ike hazie egwuregwu ndị ahụ ịgbanwe nkanka maka a plastic, gbanwee ndị iro n'ime ndị ọbịa ma ọ bụ ọbụna na-enwe ike ịmepụta ọbịa isi. N'oge ọ na-enyebeghị ọtụtụ ozi gbasara ya, mana ọ na-elebara nhazi anya ka onye ọkpụkpọ ọ bụla, ebe ọ bụla egwuregwu ahụ malitere, nwere ike ịnweta ahụmịhe ndị ọzọ site na nnukwu egwuregwu a nke Minecraft maara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Minecraft na-ewe nnukwu nzọụkwụ iji bụrụ egwuregwu vidiyo zuru ezu
Etu ị ga-esi chekwaa ma ọ bụ kpoo ọmụma gam akporo ka ị ghara ichefu ha